पोर्न मूभीमा प्रवेश गरेकी यी अभिनेत्रीको किन भयो मृत्यु ? | Kendrabindu Nepal Online News
पोर्न मूभीमा प्रवेश गरेकी यी अभिनेत्रीको किन भयो मृत्यु ?
२७ पुष २०७४, बिहीबार १८:१२
एक मोडल, जसले भर्खरै मात्र वयस्क (एडल्ट) मूभीमा करियर बनाउँदै थिइन्, उनको मृत शरीर फेला परेको छ । उनकै घरमा उनलाई मृत अवस्थामा फेला पारिएको हो । मोडलको नाम हो, ओलिविया नोवा । उनी अमेरिकाको लस भेगासमा बस्थिन् ।
यसअघि क्रिसमसमा उनले आफु एक्लो भएको गुनासो गरेकी थिइन् । उनले एक महिनाअघि मात्र एडल्ट फिल्म ज्वाइन गरेकी थिइन् । भनिहालौ, अघिल्लो बर्ष अप्रिलमा उनका ब्वाइफ्रेन्डले पनि सुसाइड गरेका थिए ।
यी मोडल २० बर्षकी थिइन् । उनी आफ्नै नीजि निवासमा मृत भेटिएकी हुन् । त्यहाँ केहिदिन अघि उनी होलिडे इन्जोए गर्नका लागि पुगेकी थिइन् ।
क्रिसमसको होलिडेको क्रममा उनले ट्वीट गरेर एक्लोपनले सताएको बताएकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘म एक्लै होलिडे विताइरहेकी छु ।’
उनलाई काम लगाइदिने एजेन्सीले बताए अनुसार नोवा एकदमै राम्ररी काम गर्ने र भलाद्मी खालकी थिइन् । उनको मृत्यु अप्रत्यासित भएको भन्दै एजेन्सीले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
उनले सुसाइड गरेको संकेत देखिदैन । फेरी उनीसँग अरु कोहि भएको जस्तो पनि बुझिएको छैन । आखिर कसरी भयो त उनको मृत्यु ? रहस्यमय छ । त्यसो त एजेन्सीले बताए अनुसार पोर्न स्टारहरु धमाधम मृत्यु भइरहेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा चार जनाको मृत्यु भयो । एजेन्सी
Porn Actress, Sucide
Prevराष्ट्रिय महत्वका साथ मनाइयो पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
डा. केसीलाई किन पक्रिएको हो, मलाई थाहा छैन –परमानन्द झा, प्रथम उपराष्ट्रपति (भिडियोमा समेत)Next
मेस्सीका दुई फ्यानले गरे आत्महत्या